Chii Chiri Chiri Zviri Mukati uye Google inofungei nezvazvo? | ECommerce nhau
Chii Chiri Chiri Zviri Mukati uye Google inofungei nezvazvo?
Izvo zvinonzi zvakatetepa zvemukati izwi rinokwanisa kukanganisa kupfuura iwe zvaunofunga mukutengesa kwezvinhu zvako kana masevhisi. Kunyangwe zvisiri zvakananga, asi zvakananga, sezvauchazokwanisa kuona kubva zvino zvichienda mberi. Inoreva pazvinhu zvese zvemukati zvinoonekwa sezvakanaka kana zvisina kukwana mhando. Kune yekutsvaga injini inoitisa kuita iyi dhijitari yekuongorora maitiro, akadai seGoogle.
Zvitsva zvekutsvaga Ivo vanozivikanwa nekunongedza mapeji ewebhu uye nekudaro vachikwanisa kuyera iwo mhando yavo yemhando. Nenzira iyi, unogona kuona nekuparadzanisa zvemhando yepamusoro zvemadhijitari kubva kune zvisiri zvemadhijitari. Asi inoenderera zvakanyanya mumaitiro ayo sezvo ichibvumidza kuratidza zvinyorwa zvakanyorerwa kana kuteedzerwa kubva kune mamwe mawebhusaiti. Mune mamwe mazwi, zvinyoro zvemukati zviri zvakashata zvemukati zvemukati uye nekudaro hapana SEO (Tsvaga Injini Kugonesa) inonzi kune iyo.
SEO kutsvagisa injini yekutsvaga kana yekutsvagisa injini uye ine sa chinangwa chikuru kupa kwakanyanya kuoneka kune webhusaiti duraini. Nemhedzisiro ingangoita nekukasira: kushanya kwakawanda kuchatambirwa uye mune ezvitoro zvepamhepo zvinogona kukanganisa kuwedzera kwekutengesa kuti ikurumidze semhedzisiro yezano iri mukushambadzira kwedigital Kusvika padanho rekuti inogona kuve yakakwana rutsigiro poindi yekusimudzira chero chirongwa kana bhizinesi paInternet.
1 Mutete Wemukati: ayo akanyanya kunanga mhedzisiro
2 Kashoma kushanya, vatengi uye nhanho yekupinda muvashandisi
3 Mhando dzakasiyana dzehunhu hutete
4 Muenzaniso unoshanda wezvakaonda zvemukati
5 Mhedzisiro pamitsara yebhizimusi repamhepo
6 Chii chakaonda zvemukati?
Mutete Wemukati: ayo akanyanya kunanga mhedzisiro
Pfungwa ine Google nezve izvi zvirimo pamapeji ewebhu zvirokwazvo haisi iyo inofarirwa kupfuura zvese. Asi zvinopesana, inovaranga nekuda kwekusagona kwavo kushanda mune zvese zvido. Zvekuti nenzira iyi, nhevedzano yezviito inogadzirwa kune varidzi veaya madomeni uye ayo anogadzirwa kuburikidza nemaitiro akasiyana anokanganisa kushambadzira kwekutengeserana.
Kuonekwa kwako kuri kuderera uye kusvika pakuvapa chinzvimbo chekukosha kudiki munzvimbo yedigital, chero yavo chikamu.
Iko kune kuderera kukuru kunoonekwa muhuwandu hwekushanya ayo anogamuchirwa pawebhu nekuda kwekushomeka kwavo kuvepo mukutsvaga injini.
Semhedzisiro yemaitiro apfuura, kutengesa kuri kuderera zvishoma nezvishoma uye iyo yakanyanyisa poindi inogona kusvikwa kuti kugona kwemuenzaniso kunoiswa mudambudziko.
Simba ravo rinozoitawo risinganyanyi kushanda sezvo vashoma vashandisi vanozotarisa padanho rekupinda kwedomain. Pachave pasina imwe mhinduro yekugadzirisa iri dambudziko rakakomba kupfuura gadziridza zvirimo zvemasaiti aya kuti ufambire mberi.
Kashoma kushanya, vatengi uye nhanho yekupinda muvashandisi
Izvi zvinotonyanya kudomwa mumatunhu akabatanidzwa ne e-commerce kana zvitoro zviripo. Hazvishamise kuti kuve nekusaonekwa kushoma zvinoreva kuti kushanya kwevatengi kana vashandisi kwakanyanya kuderedzwa kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Saka kuti chiito ichi chinosimbiswa mukunonoka kuita zviitiko mukutengesa kana kushambadzira kwezvigadzirwa kana masevhisi anopiwa kune veruzhinji.
Nepo kune rimwe divi, vari ivo vashandisi pachavo avo, vasingazive zviito zveGoogle, vanoongorora in situ hutsika hwakashata hwemapuratifomu edigital anoratidza maitiro aya. Kupi, Iko kunowanzo kuve nekurambwa kuri kukura kwemashoko anotangwa neaya masuo. Kuenda kunotsvaga vamwe vane hunhu hwakafanana, asi izvo zvinongopa mhando yepamusoro, zvese zviri mukati uye mukugadzirwa kwewebhusaiti pachayo.
Chimwe chinhu chinofanirwa kuongororwa kubva ikozvino zvichienda mberi ndezve izvo zvinonongedzera kukundikana kwemuenzaniso kutengeswa kunze kuburikidza neInternet.. Kana iwe ukasapa zvemukati zvemukati, hazvigone kukwezva huwandu hukuru hwekushanya. Ichi chinhu chausingakwanise kupokana nacho mukushambadzira mashandiro. Kusvika padanho rekuti iwe pachako uchaona kuti uri kurasikirwa sei neinjini dzekutsvaga Pasina kudiwa kwekuti chero munhu azivise kana kuzivisa.
Mhando dzakasiyana dzehunhu hutete
Zvisinei, izvi zviyero hazvisi monolithic. Asi zvinopesana, zvinoratidzwa kune akati wandei mapoka aunofanira kuziva zviri nyore. Iwe unoda kuziva kuti ndeapi anonyanya kukosha uye ndeapi akatsanangurwa neGoogle?
Duplicate zvirimo: Ndivo vanonyanya kurangwa neGoogle uye zvinogona kureva kupera kwebhizinesi rako kana chitoro chedigital.
Otomatiki zvemukati: zvakajairika kuzviita sezvo zvakavakirwa pakushandisa mazwi asina kumanikidza kana yakaderera mhando izvo zvinoita kuti injini yekutsvaga iione nekukurumidza.
Rimwe remapoka akagadzwa ndeewebhu mapeji ayo zvakasikwa kana zvakagadzirirwa kuveza iyo niche mune yako dijitari chinzvimbo. Chero zvazvingaitika, haugone kunyengedza iye anotsvaga nekuti munguva pfupi pfupi yenguva anozoziva iyi yekunyepedzera mamiriro. Uye zvechokwadi icharangwawo.
Iwe unotova patafura mimwe yemamodheru inoonekwa seyakatetepa zvemukati uye izvo zvaunofanira kudzivirira zvachose kana iwe usiri kuda kuona yako yepamhepo nyanzvi chirongwa ichiiswa mungozi. Kunze kweimwe nhevedzano yekufunga kwehunyanzvi iyo ichave iri nyaya yekurapwa kwakasiyana kubva kune ruzivo rwekuona.
Izvo zviitiko zvinogara zvichikuvadza bhizinesi rako uye izvo zvisingawanzo kupfeka semhedzisiro yezvinhu zvisina hukama nezviito zvako. Kana paine zvakapetwa zvirimo, semuenzaniso, munhu wega ane basa anozova iwe semaneja weprojekiti. Kana, zvichikundikana izvo, iye munhu anotarisira kugadzira nekuchengetedza zvirimo. Iwe haugone kupomera vechitatu mapato, ndoda nzira iyo kwairi kunongedzwa. Pachave pasina imwe mhinduro, nekudaro, pane kushandura zano mumutsetse wekuita kwedhijitari.
Muenzaniso unoshanda wezvakaonda zvemukati
Zvichava zvakakosha kuti iwe uzive mashandiro anoita Google uye zvimwe zvavanoziva izvi zvisingakoshese zvemukati. Semuenzaniso, kana paine mashoma kwazvo mazwi pane yedu blog uye izere nemitsara isina zvainoreva, usakahadzika pasi pechero mamiriro ezvinhu kuti ichave ari mamwe emasampuni ayo Google anozoona seakasviba zvemukati.
Asi maitiro aya anoenderera mberi nekuti vanozove vashandisi kana vatengi pachavo vanoona kuti izvi zvirimo hazvipi chinhu uye nekudaro kubatsira kwavo kushoma kana kushaya basa. Ichave nemhedzisiro yakafanana neiyo inogadzirwa nemainjini ekutsvaga ivo pachavo. Iwe uchaona kuti sei mumazuva mashoma iyo yekutevera-inoderedzwa. Kusvika wasvika pamuganhu mamiriro apo danho rekupinda kwezviri mukati rinenge risipo. Iwe hautombodi kurangwa nezviito zveGoogle kana zvimwe zvinotsvaga zvinotsvaga. Asi, pane kudaro, iwe ucharangwa nevateveri vako vanozopedzisira varega kuva.
Mhedzisiro pamitsara yebhizimusi repamhepo
Iye zvino isu tinofanirwa kuziva izvo zvinokonzeresa zviri pazvitoro chaizvo. Zvakanaka, pane njodzi kupfuura muoni wekutambura a yakakwira bounce mwero semhedzisiro yekusapa zvinonakidza uye zvemukati zvemukati kune vanogamuchira. Izvi zvinoreva mukuita kuti tsvagiridzo yemushandisi inowanzo dzoreredzwa kune mamwe mapuratifomu edhijitari. Ne kurasikirwa uko kunogona kuburitsa izvi zvisingadiwe mhedzisiro.
Kana iwe ukatarisa padyo, paunotsvaga kiyi kiyi paGoogle kana imwe injini yekutsvaga, mhedzisiro irondedzero yemadomeni akaiswa zvakanaka kwazvo. Sei? Zvakanaka nekuda kwekuti ivo havatariswe sevatete zvemukati. Ndokunge, iwo emhando yepamusoro zvemukati zvinoratidzirwa nemipiro inotevera yatinokufumura pazasi:
Zvinyorwa, ruzivo kana chero imwe mhando yezvinyorwa zvine zvakajairika dhinomineta mune ese iwo. Icho hachisi chimwe kunze kwehunhu hwayo hukuru uye kazhinji zvinowirirana nezvakanakisa zvitoro uye midhiya midhiya.
Mutauro unoshandiswa unonyatsonzwisisika kune wese munhu uye zvirokwazvo nevamwe mitsara yakanyatsogadzirwa izvo zvinokurumidza kugamuchirwa neinjini yekutsvaga iri mubvunzo.
Icho chiri pamusoro zvirimo zviri zvekutanga uye hakuna kumbove nekutevedzera kana kutevedzera mavari. Iwo mareferenzi echikamu chevatengi nevashandisi vanoda kutsvaga iyo mhando yeruzivo.
Naizvozvo, hapana mabhureki kune mamwe mapeji ewebhu mune yako chikamu uye kuti ingakanganisa zvakadii kune ako ekutengesa kana ehunyanzvi zvido. Uye zvakare, iwe unozopihwa mubairo neakanakisa mamiriro. Muzviitiko zvakawanda kubva kuSEO (Tsvaga Injini Kugonesa).
Chii chakaonda zvemukati?
About nguva kuitira kuti iwe uri munguva yekugadzirisa yako yedhijitari yekushambadzira zano. Zvemukati zvakashata zvinogona kushandurwa kuita zvine simba zvakanyanya uye zvinonakidza chinhu. Asi pane izvi unofanirwa kuve nechikurudziro kuti uzviite. Panguva ino, nzira yakanakisa yekuzadzisa ichi chinodikanwa chinangwa kupa yako zvirimo fomati yakajeka iyo inofarira vashandisi. Sezvawaona, hazvingatorere iwe simba rakawandisa kuti usvike panzira idzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Analytics, CRM uye Big Data » Chii Chiri Chiri Zviri Mukati uye Google inofungei nezvazvo?
6 makiyi ekutsvaga ekushandisa
Chii chinonzi mutengi persona uye kuti ungachiziva sei?